विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : नेपालमा दैनिक १५ जनाले गर्छन् आत्महत्या - Birgunj Sanjalविश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : नेपालमा दैनिक १५ जनाले गर्छन् आत्महत्या - Birgunj Sanjalविश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : नेपालमा दैनिक १५ जनाले गर्छन् आत्महत्या - Birgunj Sanjal
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : नेपालमा दैनिक १५ जनाले गर्छन् आत्महत्या
२४ भाद्र २०७६, मंगलवार १०:१६
काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो पटक आत्महत्या गर्ने क्रमम बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आत्महत्याको अवस्था भयावह र विकराल बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा करिब ६ हजार जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा नेपालमा ५ हजार ७ सय ५४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने आत्महत्याको दर घट्नुभन्दा बढ्दै गएको छ। आव ०७०–७१ मा ४ हजार ५ सय ४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने २०७१–७२ मा आत्महत्या गर्नेको संख्या ४ हजार ३ सय ३२ जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै २०७२–७३ मा ४ हजार ६ सय ८० जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने २०७३–७४ मा यो संख्या बढेर ५ हजार १ सय २४ पुगेको थियो। यस बीचमा तीन वर्ष निरन्तर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ । ०७४–७५ सालमा ५ हजार ३ सय १७ जनाले आत्माहत्या गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ भने गत आवमा ५ हजार ७ सय ५४ ले आत्महत्या गरेका छन् । यो अघिल्लो आवभन्दा ४३७ ले बढी हो ।
आव०७४–७५ सालको तथ्यांक हेर्ने हो भने आत्महत्या गर्नेमा पुरुषको संख्या २ हजार ८ सय ५४ पुरुष, २ हजार २ सय महिला, १ सय ११ बालक र १ सय ३९ बालिका रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तथ्यांक अनुसार औसतमा नेपालमा १५देखि १६ जनाले दैनिक रुपमा आत्महत्या गर्दछन् ।
यसमध्ये ७५ प्रतिशतले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको देखिन्छ भने २३ प्रतिशतले विष पिएर आत्महत्या गर्ने गर्दछन् । त्यसैगरी ५ प्रतिशतले प्रेममा धोका पाएपछि आत्महत्या गरेको र १५ प्रतिशतले पारिवारिक कलहका कारण आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेको सहायक कारण गरिबी भएको पनि देखिएको छ । गरिबीका कारण ७.५ प्रतिशतले आत्महत्या गरेका छन् भने असफलताका कारण २.५ प्रतिशत, व्यवसायीक तनावका कारण ३.७ प्रतिशत र आर्थिक लेनदेनका कारकणले २ प्रतिशतले आत्महत्या गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले मानसिक रोगका कारण र सामाजिक अवस्थाका कारणले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो भएको बताउछन् ।
डा. पाण्डेका अनुसार मानसिक र व्यावहारिक समस्या (९० प्रतिशत), मनोसामाजिक तथा अन्य आघातजन्य घटना, घरेलु हिंसा र यौन दुर्व्यवहार, लागुऔषध र मादक पदार्थको दुर्व्यसन, एक्लोपन, अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध बिग्रनु, आफ्नो नजिकको मान्छे गुमाउनु, असफलता, प्रेममा असफलता, आर्थिक समस्या, सामाजिक रूपमा बदनाम हुनु र नकारात्मक तनाव व्यवस्थापन जस्ता विषयले आत्महत्या बढ्दो छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार आत्महत्या गर्नेमा १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत छन् भने त्यसमा पनि ज्यालादारीमा काम गर्ने र बेरोजगार धेरै छन् ।
आत्महत्याको प्रयास गर्नेमध्ये झण्डै ९५ प्रतिशत मानसिक रोगी रहेको विश्वव्यापी तथ्यांकले देखाउँछ भने ८० प्रतिशत कारण डिप्रेसन मानिछ । आत्महत्या गर्नेहरुमा ९० प्रतिशत कारण मानसिक र व्यावहारिक समस्या रहेको पाइन्छ ।
माथि उल्लेखित तथ्यांक प्रहरीमा भएको दर्ता वा जानकारी मात्रै हो। आत्महत्या गर्नेको संख्या यो भन्दा बढी हुनसक्ने चिकित्सक बताउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०१२ को सर्वेक्षण अनुसार नेपाल आत्महत्या गर्ने देशमध्ये ७औं नम्बरमा थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मुत्यु भएका एक लाख मानिसमध्ये २५ जनाको मृत्यु आत्महत्याका कारणले भएको मान्न सकिन्छ ।
संसारभर १५ देखि २९ वर्ष समूहमा मानिसको मृत्यु हुनुमा आत्महत्या दोस्रो प्रमुख कारण हो।
मर्ने इच्छा नराखी अन्य उपलब्धिको लागि जानीजानी आफूलाई हानि गर्नुलाई आत्महत्या नमानिने चिकित्सक शाक्य बताउँछन् । आत्महत्या अत्यन्त जटिल मनोवैज्ञानिक, जैविक एवं अपराध मानिन्छ । तर आधुनिक विज्ञानमा आत्महत्यालाई गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपज र आत्महत्याको सोच तथा कोसिसलाई तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने संवेदनशील चिकित्सकीय विपदको रुपमा हेरिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष विश्वमा १६ लाख व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्छन् भने ८ लाख मानिसको मत्युको कारण आत्महत्या हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार वर्षेनी करिब १० लाख मानिस आत्महत्याको प्रयास गर्छन् भने ४० सेकेण्डमा एकको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ। यो संख्या समस्त प्राकृतिक तथा मानव निर्मित प्रकोप, युद्ध, आतकंकारी हमला, हत्या र हिंसाहरुबाट हुने वार्षिक मृत्युदर भन्दा पनि बढी हो। प्राय महिलाहरु पुरुषभन्दा बढी आत्महत्याको प्रयास गर्ने गर्दछन्। तर खतरनाक तरिका अपनाउने हुनाले पुरुष नै बढी मर्ने गरेको पाइन्छ ।